अफगानी सुन्दरीको बिकिनी पोज ! जसले सर्वोच्च अदालत समेत हल्लाइदियो - मध्य पहाड
अफगानी सुन्दरीको बिकिनी पोज ! जसले सर्वोच्च अदालत समेत हल्लाइदियो
Posted on २९ भाद्र २०७८, मंगलवार १३:४१ - २९ भाद्र २०७८, मंगलवार १३:४१ by मध्यपहाड संवाददाता
अफगानिस्तानमा तालिबानको नियन्त्रण भएपछि चारैतिर हलचल मच्चिएको छ । अफगानिस्तानमा तालिबानको राज कायम भएपछि कैयौं गम्भीर परिवर्तन देखिन थालेका छन् । मानिसहरुले घरका झ्यालहरु कालो रंगले पोत्न थालेका छन् । महिलाहरुले कैयौं वर्षदेखि थन्किएका बुर्काहरु निकाल्न थालेका छन् । यसअघि एक समय यस्तो पनि थियो जतिबेला महिलाहरुको कपडा र फेशनमा यति धेरै पहरा थिएन । विदा समादजाइ यस्तै अफगानिस्तानकी हुन् जसका कारण ठूलो बबाल मच्चिएको थियो ।
विदा समादजाइ अफगानी मूलकी मोडल तथा अभिनेत्री हुन् । उनको जन्म २२ फेब्रुअरी १९७८ मा काबुलमा भएको थियो । त्यतिबेला अफगानिस्तानमा फेशनको प्रचलन धेरै थियो । यस्तोमा विदा पनि ग्ल्यामरको संसारतिर आकर्षित भइन् र पछि उनले यही क्षेत्रमा आफ्नो करिअर बनाइन् । अफगानिस्तानमा १९७४ पछि २००३ मा मात्र मिस अफगानिस्तानको प्रतियोगिता भएको थियो र २००३ को उपाधि विदाले नै जितेकी थिइन् ।
विदाले अन्तर्राष्ट्रिय ब्युटी पेजेन्ट मिस अर्थ २००३ मा पनि भाग लिएकी थिइन् । यस क्रममा उनले रातो बिकिनीमा र्याम्प वाक गरेकी थिइन् । उनको यो बिकिनी पोजका कारण निकै विवाद भएको थियो । अफगानिस्तानका कैयौं मानिसहरु विदाले बिकिनी लगाएका कारण आक्रोशित भएका थिए । अफगानिस्तानको सर्वोच्च अदालतमा पनि उनले बिकिनी लगाएको कुराको आलोचना भएको थियो । अदालतले यस किसिमको अंग प्रदर्शन इस्लामी कानुन र अफगान परम्पराविरुद्ध भएको टिप्पणी गरेको थियो ।
विदालाई मिस अर्थ प्रतियोगितामा ‘ब्युटी फर द कज’ नामको छुट्टै सम्मान दिइएको थियो । १९९६ मा विदा अफगानिस्तानबाट अमेरिका गएकी थिइन् । उनले क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटीबाट उच्च शिक्षा हासिल गरिन् । पछि उनले अमेरिकाकै नागरिकता लिइन् । अमेरिकामै रहेर उनले अफगानी महिलाहरुको अधिकार र उनीहरुको शिक्षाको लागि च्यारिटी पनि सुरु गरिन् । अफगानिस्तानमै हुर्किएकी विदाले त्यहाँ तालिबानी शासन देखेकी थिइन् । २००३ मा सुन्दरी प्रतियोगितामा भाग लिने क्रममा उनले रोयटर्सलाई दिएको अन्तरवार्तामा अफगानिस्तानमा महिलाको अवस्थाबारे चर्चा गरेकी थिइन् ।
This entry was posted in मनोरञ्जन, प्रवास by मध्यपहाड संवाददाता. Bookmark the permalink.
← पहिरोले कर्णाली राजमार्ग अवरूद्ध
जनार्दनको ठोकुवा :केही दिन सरकारको खर्च रोकिन सक्छ →